Xinhua Myanmar - ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၌ COVID-19 ကြောင့် တစ်ရက်အတွင်း သေဆုံးမှု အများဆုံးဖြင့် ၁၀၂ ဦးရှိ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ဒါကာမြို့၌ ဘတ်စ်ကားတစ်စီးပေါ်တွင် နှာခေါင်းစည်း တပ်ဆင်စီးနင်းမှုများအား တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက လိုက်လံ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနေစဉ်(ဆင်ဟွာ) Asia
ယင်းမှာ သုံးရက်ဆက်တိုက် နေ့စဉ် သေဆုံးသူ ဦးရေ ၁၀၀ အထက် ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး သေဆုံးသူ စုစုပေါင်း ၁၀,၃၈၅ ဦးထိ ရှိလာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုံး(DGHS)က ဧပြီ ၁၈ ရက်တွင် COVID-19 လူနာသစ် ၃,၆၉၈ ဦး စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီး လူနာပေါင်း ၇၁၈,၉၅၀ ဦးထိ မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ဒါကာမြို့ရှိ လမ်းပေါ်တွင် သွားလာနေသူများအား တာဝန်ရှိသူများက နှာခေါင်းစည်းများ ပေးဝေနေသည်ကို တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဧပြီ ၁၄ ရက်မှ စ၍ တင်းကြပ်သော lockdown ကန့်သတ်မှုများအား လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် အတည်ပြုရောဂါကူးစက်မှုသည် ဧပြီ ၁၃ ရက်မတိုင်မီ တည်ရှိခဲ့သော နေ့စဉ် လူနာ ၇,၀၀၀ ခန့်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက လတ်တလောတွင် တရက်လျှင် ၄,၀၀၀ ဝန်းကျင်သို့ ကျဆင်းလာခြင်း နှင့်အတူ နေ့စဉ် COVID-19 လူနာအရေအတွက်သည် ကျဆင်းလာကြောင်း သိရသည်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံအနှံ ပြီးခဲ့သော ၂၄ နာရီအတွင်း ဓာတ်ခွဲနမူနာ ၁၉,၄၀၄ ခုအား စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း တရားဝင်ထုတ်ပြန်သော အချက်အလက်များတွင် ဖော်ပြထားသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ဒါကာမြို့၌ အိမ်စီးကားပေါ်တွင် နှာခေါင်းစည်း တပ်ဆင်ထားသော လမ်းသွားလမ်းလာကို တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ကြည့်ရှုစစ်ဆေးနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဧပြီ ၁၈ ရက်တွင် ပြန်လည်သက်သာလာသူ ၆၁,၂၁ ဦး အပါအဝင် စုစုပေါင်း ပြန်လည်သက်သာကောင်းမွန်လာသူ အရေအတွက်မှာ ၆၁၄,၉၃၆ ဦးထိ ရှိလာခဲ့ကြောင်း DGHS ထံမှ သိရသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၌ COVID-19 ကြောင့် သေဆုံးမှုနှုန်းမှာ ယခုအခါ ၁ ဒသမ ၄၄ ရာခိုင်နှုန်း ရှိပြီး ပြန်လည်သက်သာမှုနှုန်းမှာ ၈၅ ဒသမ ၅၃ ရာခိုင်နှုန်း ရှိကြောင်း တရားဝင်ထုတ်ပြန်သော အချက်အလက်များအရ သိရသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ၌ နေ့စဉ် COVID-19 လူနာ အမြင့်ဆုံးအရေအတွက်မှာ ဧပြီ ၇ ရက်တွင် ၇,၆၂၆ ဦး ရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
DHAKA, April 18 (Xinhua) -- Bangladesh on Sunday reported its deadliest day of COVID-19 so far, witharecord 102 deaths from the coronavirus epidemic.
It was the third consecutive day for more than 100 daily deaths from COVID-19 reported in the Asian country, bringing the death toll to 10,385.
The country's Directorate General of Health Services (DGHS) also reported 3,698 new confirmed cases of COVID-19 on Sunday, raising its total tally to 718,950.
It came as daily COVID-19 cases decreased, with confirmed infections dropping to around 4,000 per day recently, compared to about 7,000 in each of the days before April 13, showing early signs that strict lockdown restrictions beginning April 14 have been working.
The official data showed that 19,404 samples were tested in the last 24 hours across Bangladesh.
The total number of recovered patients in the country stood at 614,936 including 6,121 new recoveries on Sunday, said the DGHS.
According to the official data, the COVID-19 fatality rate in Bangladesh is now 1.44 percent and recovery rate is 85.53 percent.
Bangladesh recorded the highest number of daily cases at 7,626 on April 7. Enditem